Nin Dhallinyaro ah oo loo xidhay Aflagaaddo Madaxweyne iyo warqado amarka xadhiggiisa ah oo ay qoreen Wasiirka Ciyaaraha iyo Taliska Boolisku | Somaliland.Org
Nin Dhallinyaro ah oo loo xidhay Aflagaaddo Madaxweyne iyo warqado amarka xadhiggiisa ah oo ay qoreen Wasiirka Ciyaaraha iyo Taliska Boolisku
November 28, 2007	Hargeysa (Somaliland.org) – Ciidamada booliska Somaliland ayaa xalay qabtay, xabsigana u taxaabay nin dhallinyaro ah oo magaciisa la yidhaahdo Maxamed Cabdi Dhabbeeye, kadib markii lagu eedeeyey inuu aflagaaddeeyey Madaxweynaha Somaliland, Daahir Riyaale.
Maxamed Cabdi waxa uu ka mid ahaa koox dhallinyaro ah oo dhowaan ku qabtay magaalada shir ay ku cambaareeyeen faragelintii xukuumaddu kula wareegtey xafiiskii Dalladda isku-xidhka ururrada Xuquuqul Insaanka ee SHURONET iyo xadhigga siyaasiyiinta ururka Qaran, isla markaana ay kaga digayeen warar maalmahaa soo baxay oo sheegayey in xukuumaddu doonayso inay xidhxidho hoggaanka Dalladda SHURONET.
Amarka qabashada ninkaa dhallinyarada ah oo toddobaadkii hore soo baxay waxa ku lug lahaa wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Somaliland, mudane Maxamuud Siciid Maxamed oo warqad u qoray Taliska Booliska, taas oo uu ku dalbanayo in la xidho ninkaas, lana horgeeyo Guddida Nabadgelyada.
Warqadda Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaruhu u qoray Kusimaha Taliyaha Booliska, Maxamed Shiil Dhidar, ogeysiinna uu siiyey Badhasaabka Gobolka Hargeysa, Cali Maxamed Xasan (Cali Asad) oo saxaafaddu heshay, kana soo baxday xafiiska Wasiirka, 13 November, 2007, waxay u qoran tahay sidan:
“Ujeeddo: Soo Qabasho (Maxamed Cabdi Dhabbeeye):
Waxaa nasiib darro ah in ninka magaciisu kor ku xusan yahay oo aad idinkuna ka warhaysaan boolis ahaan, uu si ula kac ah habeen dhan Madaxweynaha JSL uga caayey TVga, isaga oo hadaladiisa ay ka mid ahaayeen: [kan oo kale maaha kii ka noqon lahaa Madaxweyne dal Dimuqraaddi ah, mana garanayo cid dooratay, waxaanu ku yimi xaaraan] iyo wax la mid ah.
Haddaba, ninkani wuxuu ku sifoobey aflagaadada Madaxda sare iyo kicinta dhallinyarada.
Waxaan kaa codsanaynaa inaad ka qaaddo tallaabo sharci ah ee ku haboon inta aanu dhallinyarada kale dhex dhigin dhibaato ballaadhan, weliba ha la horkeeno Guddida Nabadgelyada”.
MD. Maxamuud Siciid Maxamed,
Wasiirka Wasaaradda DH & Sportiga.
Sidoo kale, Taliyekuxigeenka Booliska Somaliland, ahna kusimaha Taliyaha Booliska, Maxamed Shiil Dhidar ayaa u qoray Taliyaha Laanta Baadhista Dembiyada ee Booliska (CID) warqad uu ku amrayo inay soo qabtaan Maxamed Cabdi Dhabbeeye.
Warqaddaas Taliyaha oo aanu iyadana helay, waxay u qoran tahay sidan:
“Ujeeddo: Soo qabasho Eedaysane:
Taliyaha Qaybta Baadhista Dembiyada ee warqaddani tooska uga socoto waxa la farayaa inuu soo qabto Eedaysane Maxamed Cabdi Dhabbeeye, kaasoo si badheedh ah uga caayey Madaxweynaha JSL Tv-ga madaxa bannaan.
Haddaba, ninkaas hala soo qabto, hana la horgeeyo Guddida Nabadgelyada, waxaan halkan idiinku soo lifaaqayaa warqad uu soo qoray Wasiirka Dh. Sports-ka oo ku saabsan isla arrinkan.”
Tallaabadan lagu xidhay Maxamed Cabdi Dhabbeeye iyo qoraaladan caddaynaya cidda bixisay amarka xadhigiisa ayaa ah mid si cad uga markhaati-kacaysa sida xukuumaddu u xalaalaysatay adeegsiga Guddida Nabadgelyada oo maxkamad la’aan dadka jeelka ugu dirta, uguna goysa xukun bilo iyo sannado ah.
Waxayna qoraaladani u markhaati furayaan dood uu dhowaan ka jeediyey Golaha Wakiillada, mudane Ibraahim Jaamac Cali (Rayte) oo isagoo ka hadlayey doodda xeerka Dhismaha Komishanka Xuquuqul Insaanka dowladda, sheegay in xaaladda xuquuqul Insaanka Somaliland ay maanta marayso halkii ugu hooseysey ama ugu liidatey, isaga oo xusay in maxaabiista ku jira jeelalka Somaliland laba meelood oo meel ama 37% aanay marin dariiqii sharciga ahaa ee maxkamadaha, isla markaana aanay helin Qareenno difaaca.
Xildhibaan Rayte, waxa uu mudanayaasha Golaha Wakiillada ku baraarujiyey in ay ogaadaan in dad badani ay u xidhan yihiin Guddida loogu yeedho Guddida Nabadgelyada iyo in sidoo kale dadka lagu xidho amarka Wasiirrada iyo masuuliyiin kale.